डा. रत्नावली शर्मा काठमाडौं, १३ जेठ
‘मुख छ त मुलुक छ’ यसै कहाँ भनिएको हो र ! मानिसको राम्रो र नराम्रो व्यवहार बोलीमै निर्भर हुन्छ । वाणी र वचनको मधुरता नै हाम्रो पहिचान हो । एकअर्काप्रतिको आस्था र सम्मान पनि मानिसले एकअर्काप्रति गर्ने व्यवहार र बोलीमा निर्भर हुन्छ तर अचेल वाणी बिझाउन थालेको छ । हामी जहाँ जन्मियौँ, जुन संस्कारमा हुर्कियौँ र जुन परम्परामा आधारित छौँ, त्यसले भन्छ-
तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने का दरिद्रता ।।
अर्थात् प्रिय वाक्य या प्रिय वचनले नै सबै प्राणीहरू सन्तुष्ट हुन्छन् । त्यसैले प्रिय बोलौँ, प्रिय वचन प्रदान गर्न किन दरिद्रीपन देखाउने ?
भाषा विचार विनिमयको माध्यम हो तर विचारको विनिमय गर्दा पनि भाषामा प्रयोग गरिने शब्दले श्रोतालाई कस्तो असर पार्छ भन्ने कुराचाहिँ वक्ताले विचार गर्नुपर्छ ।
प्रस्तुत लेख न त भाषाको अर्थ बुझाउन लेखिएको हो, न वाणी अर्थात् वचनको विनयशीलताबारे नै । यस लेखमा अहिले हाम्रो समाजमा मानिसहरूले प्रयोग गरिरहेका बोली, वचन र वाणीका कारणले उत्पन्न हुँदै गरेको असंवेदनशीलताले चस्काएका केही पाटाहरू मात्र केलाउने जमर्को मात्र गर्दै छु ।
हुनत मान्छे आफू जे छ, वचन र वाणीमा त्यही झल्किने हो । मान्छेको सोचाइ, उसको परिवेश र उसको संस्कारले निर्धारण गर्छ, ऊ के हो भन्ने । तर, मान्छे-मान्छे मिलेर बन्ने समाजमा मान्छेकै वाणी मान्छेलाई बिझाइरहेको हुन्छ ।
शास्त्र भन्छ- ‘आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।’
अर्थात् आफूलाई प्रतिकूल लाग्ने व्यवहार अरूलाई पनि गर्नुहुँदैन तर हामी त्यसो गर्दैनौँ । अहिले हाम्रो समाजमा आफूले जे गरे र जे भने पनि अरूले चाहिँ आफूलाई मीठो वचन देओस् भन्ने तीव्र अपेक्षा रहन थालेको छ ।
देशको मेरुदण्ड राजनीति हो । राजनीति गर्नेहरू सबैका आदर्श हुनुपर्छ । वचनमा मधुुरता, कर्ममा निष्पक्षता र व्यवहारमा समानता हुुनुपर्ने हो तर अचेल नेतृत्व पनि वचनको दरिद्रता झल्काउँदै क्षुुद्र टिप्पणीमै उत्रिएको देखिन्छ ।
देशको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको भाषा र बोली, संयम गुमाएका मान्छेहरूको जस्तै सुनिन्छ । के हामीले शिष्टता, आदर र सद्भाव गुमाएकै हौँ त ? हाम्रो चरित्र र चिन्तनमा किन यति विघ्न विचलन ?
देशको नेतृत्व सम्हालिसकेका मान्छे हुन् या विद्यार्थी राजनीति गरेर भविष्यमा देशको नेतृत्व गरिहाल्छु भन्ने भावनाले आफैँलाई चङ्गाझैँ बनाएकाहरू नै किन नहुन्, या फेरि कर्मचारी संयन्त्रमा रहेर स्थायी सरकारको नेतृत्व गरेका व्यक्तिहरू नै किन नहुन्, उनीहरू सबैका लिखित तथा मौखिक अभिव्यक्तिमा भाषिक दरिद्रता र असंवेदनशीलताबाहेक केही पनि देख्न सकिँदैन ।
भाषिक दरिद्रता र असंवेदनशीलता राजनीतिकर्मी र कर्मचारी वर्गका केही व्यक्तिमा मात्र होइन, त्यही वाणीलाई व्यापार बनाउँदै आएका कवि, लेखक र पत्रकारितामै पनि आफूलाई सिद्धहस्त बनाएकाहरूले पनि निकृष्ट र तुच्छ भाषाको प्रयोगले आफ्नो उचाइ भत्काइरहेका हुन्छन् । हुनत नैतिकताको खडेरी परिरहेको ठाउँमा अरू प्रसङ्ग र विषय खोज्न छाडेर बोली-वचनमै अल्झिएर २१औँ शताब्दीमा पनि वाहियात कुरा गर्ने ? भन्ने पनि कसैलाई लाग्न सक्ला तर वचनमा नै मानिसको व्यवहार अडिने भएकाले यो कुरा गरिएको हो ।
हुनत आजको समाज विचलन, वितृष्णा र विच्छेदको कुभावनाले ग्रस्त हुँदै गएको छ । सम्बन्ध जोड्ने बोली र वचन बिझाउने काँडा जस्तै बनिरहेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल व्याप्त भएर हो या किन हो, अचेल मानिसहरूका बारेमै छुद्र टीकाटिप्पणी प्रशस्त देख्न र पढ्न पाइन्छ । हामीमा नैतिकताको कमी भयो या सदाचार हरायो ? हामी किन उन्मादग्रस्त भएर अरूलाई हेप्ने, घोच्ने गरी या फेरि आफ्नै अस्तित्वमा पनि आँच आउने गरी अभिव्यक्ति दिइरहेका छौँ ? यो सबै देख्दा यस्तो लाग्छ, अब बाँकी के नै छ र ?
माया, प्रेम, रिस, राग, घुर्की, संवेदना सबै बोलीद्वारा नै अभिव्यक्त हुने हुन् । मानिसको छोटो अभिव्यक्तिमा पनि प्रस्ट झल्किन्छ मान्छेले के अभिव्यक्त गरेको छ भन्ने । तर, अहिले हामी केही आक्रामक भएका छौँ । वचनको छुद्रताले चर्चा कमाउने क्रम यति तीव्र छ कि कोही पछाडि परिन्छ कि भन्ने गरी अगाडि बढ्छन् । मानिसले फेसबुक, ट्वीटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल त अरूकै खेदो खन्न र आफ्नो प्रशंसामा भरपूूर उपयोग गरिरहेको छ सँगै वाणी र वचनमै पनि कति दरिद्र छु भनेर देखाइरहेको छ ।
विश्वभर कोरोना संक्रमणले आक्रान्त बनाइरहँदा ठूला शक्ति राष्ट्रहरू नै एकअर्कालाई तुच्छ आरोप लगाइरहेका छन् । उनीहरूको आरोप-प्रत्यारोप र व्यवहार हेर्दा लाग्छ, गुच्चा खेलिरहेका २ केटाकेटीका बीचको द्वन्द्व हो त्यो ।
नेपालमा कोरोना संक्रमित पहिलो बिरामीको मृत्यु हुँदा ‘पहिलो विकेट गिर्‍यो’ भन्दै सामाजिक सञ्जालहरूमा राखिएको थियो । कस्तो संवेदना हो यो ? कसरी गरिन्छ यति तीव्र रूपमा यस्ता छुद्र शब्दचयन ? अस्पताल वा सरकारले कसैको मृत्युको पुष्टि गर्नुभन्दा पहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘विकेट गिराइहाल्ने’ खेलाडी हामी कहिलेदेखि भयौँ ?
९ दिने शिशुकी आमाको मृत्यु भएको अझ हामी शब्दचित्रमा वर्णन गर्न हतार गर्छौं । मृत्यु अवश्यम्भावी छ तर कसैको संवेदनामा यति धेरै मजाक गर्न छुट छ हामीलाई ? कोरोना सङ्कटले आक्रान्त पारेका बेला यसबाट त्राण पाउने उपाय केही सुुझाउन नसकिएला तर मृत्यु हुुने क्रम बढिरहँदा यति स्कोरमा यति विकेट जस्ता निकृष्ट शब्दहरू प्रयोग गर्नेहरूलाई किन कसैको मृत्युको संवेदनाले छुन सक्दैन ?
कसैको मृत्युलाई लिएर हामी विकेट गन्दै स्कोर गर्न थाल्छौँ भने हाम्रो संवेदनाले अरू केलाई छुन सक्छ ? मानिसले किन बुझ्दैन- ‘वाक्शल्यस्तु न निर्हर्तु शक्यो हृदिशयो हि सः’ अर्थात् वचनरूपी वाणलाई बाहिर निकाल्न सकिँदैन किनकि त्यो वाण जस्तै हृदयमा घुसिसकेको हुन्छ ।
के नेपाली शब्दकोश शब्दमा यति दरिद्र छ कि कसैको मृत्युलाई क्रिकेटको विकेटसँग तुलना गर्नुपर्ने, विशिष्टहरूले पनि विपक्षी वा आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिप्रति केही अभिव्यक्ति दिँदा निकृष्ट विशेषण नै लगाउनुपर्ने हो ? के सभ्य भाषामा आफ्ना अभिव्यक्ति दिन सकिँदैन ?
त्यही शब्द अर्काले आफूलाई प्रयोग गर्‍यो भने आफूलाई सह्य हुन्छ कि हुँदैन ? भाषासँग मानवीय संवेदना जोडिएको हुन्छ । हाम्रो भाषामा शब्दको दरिद्रता छैन । त्यसैले कमसे कम भाषा प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि मानवीय संवेदनालाई विचार गरौँ किनकि शब्दमा जुन ताप वा शक्ति हुन्छ, त्यसले मानिसलाई जलाउने र आनन्द दिने दुवै काम गर्छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ १३, २०७७, १३:०८:००